I-Tranquil CBD Tincture | Okuhamba phambili kwango-2022 Okwezinhlungu
Ama-flavour, ama-Strawberry, Emvelo, Isinamoni, I-Lemon Lime, i-Tangerine
Ubukhulu: 500MG | $24.99 , 1000MG $39.99 , 2500 $69.99
Chofoza lapha Uku-oda kusayithi lethu lozakwethu Redemperorcbd.com
I-CBD tincture inezinzuzo eziningi. Isidakamizwa besilokhu sisetshenziselwa izinjongo zokwelapha kusukela ezikhathini zasendulo. Isuselwa ezitshalweni zensangu, eziqukethe amakhulukhulu enhlanganisela yamakhemikhali noma ama-cannabinoids. I-THC iyi-cannabinoid eyaziwa kakhulu. Iveza imizwa yokuthokoza. I-Cannabidiol ingenye i-cannabinoid engasetshenziswa ukukhiqiza imiphumela ye-euphoric. Kodwa-ke, akuyona i-psychoactive futhi ine-anti-inflammatory, antiseizure kanye ne-analgesic properties.
Amafutha e-CBD e-Tranquil angaphathwa ephaketheni noma esikhwameni sakho futhi adume kakhulu ngokunambitheka kwawo kwemvelo. Ngeke ungene enkingeni nge-FDA ngoba ayinayo i-gluten. Amabhodlela e-dropper enza kube lula ukuwasebenzisa. Izithako ze-tincture ye-CBD yokuhweba ziphephile. Zenziwe ngamafutha e-hemp ephilayo futhi aziqukethe izibulala-zinambuzane.
Kukhona ngisho nama-tinctures e-CBD anambitheka atholakalayo, njengalawo athengiswa yiCuraleaf. Ungakhetha kusuka ku-flavour ezintathu: i-vanilla, i-ginger-sinamoni ne-lavender-orange. Ungaxuba i-tincture nanoma yisiphi isiphuzo esiyintandokazi noma ukudla uma ungeyena umuntu othanda ukunambitheka kwayo. Uzothola okuningi kukho futhi ube nomzamo omncane. Ungayixuba nanoma yisiphi isiphuzo osithandayo noma okunye ukudla okuthandayo.
Kufanele uthintane nosokhemisi nodokotela wakho ngaphambi kokuba uqale ukuthatha i-CBD amafutha . Kufanele uqaphe ngoba akuwona wonke ama-tinctures e-CBD avunyelwe yi-FDA. Ngaphambi kokuba uqale, kuwumqondo omuhle ukubonana nodokotela wakho. Ukuhlola ukuthi lokhu kukulungele yini, ungathatha amaconsi ambalwa njalo ngamahora amabili noma kanye ngosuku. Ungakwazi ukugwema imiphumela emibi futhi ube nempilo engcono nge-tincture enhle.
Uwoyela we-CBD, ovame ukuba ngamaphesenti angama-60-70 wotshwala, uyisizinda se-herbal esigxilisiwe. Nakuba inhloso yayo eyinhloko ukukhulula ubuhlungu nokukhathazeka, ingasetshenziswa futhi ekwelapheni ubuhlungu bamalunga kanye nokudambisa ukucindezeleka. Lesi isithako se-herbal esigxilisiwe esicwiliswe oketshezini ukuze sikhiphe zonke izici zayo zokwelapha. I-tincture ingathululelwa ebhodleleni lengilazi futhi ihlanjululwe ngamanzi. Kulula kakhulu ukusebenzisa i-CBD.
I-CBD tincture inokugxila okuphezulu, okwenza isebenze kakhulu ekwelapheni izimo ezinzima. Kulula ukuyisebenzisa futhi ayinayo imiphumela emibi. Ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, kunconywa ukuthi udle ama-ounces amabili e-CBD ngosuku. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi uwoyela we-CBD akufanele udliwe ngaphambi kokudla. Ngenxa yokuthi inganciphisa ukugaya, akufanele ibe noshukela.
Izizathu ezinhle kakhulu zoku-oda i-cbd tincture kusuka ku-trytranquil.net
I-CBD tincture iwuketshezi oluphuma esitshalweni sensangu. Inikeza impumuzo ezifweni eziningi futhi inomphumela oyingqayizivele. Kubuye kuboniswe ukunciphisa ukucindezeleka nobuhlungu obuhlangene. Ungathola kalula Uwoyela we-CBD wezinhlungu endaweni yangakini yokudla kwezempilo. Ama-tinctures amaningi asekelwe ku-alcohol. Lawa ma-tincture angaba notshwala obungamaphesenti angama-60 obungaba yingozi emzimbeni wakho. Lezi kufanele zilungiswe nge-glycerin yemifino.
I-CBD tincture ingathathwa ngokwezihloko noma ngokwezilimi ngenye yezindlela ezimbili. I-CBD tincture ingathathwa ngomlomo. I-CBD tincture ingasetshenziswa ekudambiseni izimpawu ezifana ne-tendonitis ne-arthritis. Kunganciphisa nobuhlungu bemisipha. Ngaphambi kokusebenzisa ama-tinctures e-CBD, kubalulekile ukufunda nokulandela yonke imiyalo. Lawa ma-tinctures akufanele athathwe esikhundleni semithi enqunyiwe. Kodwa-ke, ama-tinctures angaphephile futhi anenzuzo.
Kunezinhlobo ezimbili: izithako ze-CBD ezingasekelwe otshwaleni kanye nezithako ze-CBD esekwe etshwaleni. Esokuqala sivame kakhulu ekuphileni kwansuku zonke, kuyilapho iziguli ezinokukhathazeka zivame ukukhetha okwakamuva. Kuyinketho enhle kulabo abanenkinga yokukhathazeka noma yokulala. Ingase futhi isetshenziselwe ukukhulula ukungagayeki kokudla nezinye izinkinga zesisu. Kulabo abanenkinga yokuqwasha, i-CBD tincture ingaba inketho enhle. Umkhiqizo unezinzuzo eziningi.
I-tincture ye-CBD esekwe kuwoyela iyona engcono kakhulu. Lawa ma-tinctures asebenza kakhulu kunamaphilisi ajwayelekile e-CBD ngoba anezinga eliphakeme lokumuncwa kulawo mafutha. Abantu futhi bathola inguqulo esekwe etshwaleni ilula kakhulu. Iyakwazi ukusiza abantu abanokukhathazeka nobuhlungu kanye nokwenza ngcono ukulala nokwehlisa umfutho wegazi. Ucwaningo olwengeziwe luyadingeka ukuze kutholwe umthamo ongcono kakhulu walabo abaphethwe yilezi zimo.